तपस्वीको भेषमा यस्तोसम्मको घिनलाग्दो हर्कत गर्ने रामबहादुर बमजन एकाएक फरार, कहाँ पुगे ? — Sanchar Kendra
तपस्वीको भेषमा यस्तोसम्मको घिनलाग्दो हर्कत गर्ने रामबहादुर बमजन एकाएक फरार, कहाँ पुगे ?
काठमाडौँ । तपस्वीको भेषमा बस्दै आएका रामबहादुर बमजन सिन्धुली आश्रमबाट भागेको प्रहरीले बताएको छ। ह’त्या-हिं’सा, ब’ला’त्कार तथा आनीहरूलाई बेपत्ता पारेको आरोप लागेका बमजनलाई पक्रन प्रहरीले जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट बिहीबार अनुमति लिएको थियो। प’क्रा’उ अनुमति लिएर प्रहरी शुक्रबार बिहान बमजनको सिन्धुली आश्रममा पुगेको थियो।
बिहीबार रातिसम्म बमजन आश्रममै रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी उनलाई पक्रन शुक्रबार बिहानै आश्रम पुगे पनि उनी त्यहाँ नभेटिएको सर्लाहीका एसपी विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिए। बमजनलाई बिहान छ बजेदेखि प्रहरीले आश्रम र वरिपरिको जंगलमा खोजिरहेको छ। बिहीबार सर्लाही जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर शुक्रबार बिहान बमजन आश्रम पुग्दा उनको मूलघरमा ताला लागेको प्रहरीले बताएको छ।
‘बमजन हिजो रातिसम्म यहीँ थिए भन्ने सूचनाका आधारमा हामी उनको आश्रम पुगेका थियौं, त्यहाँ पुग्दा उनी थिएनन्। उनी कतै भागेको वा आफैं गायब भएको हाम्रो अनुमान छ,’ एसपी पोखरेलले भने,’खोजीकार्य जारी छ, आवश्यक परे हामीले कुकुरसमेत परिचालन गरेर उनलाई खोज्छौं।’ आश्रममा रहेका ४ जना ‘गुरू’हरूलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि प्रहरीले बतायो।
बमजन एक अनुयायीको ह’त्या गरेको, तीन आनी, एक अनुयायीलाई बेपत्ता पारेको र कम्तिमा एक आनीलाई ब’ला’त्कार गरेको आरोप छ। बमजनका आश्रमबाट आनीहरू सर्लाहीकी रिता वोट, नुवोकोटकी कर्मा तामाङ र मकवानपुरकी फूलमाया रूम्बा बे’पत्ता पारिएका छन्। बमजनका दुई अनुयायी बाराका सुरेश आलेमगर र मकवानपुरका सञ्चमान वाइबा पनि उनको सिन्धुलीस्थित आश्रमबाट बेपत्ता छन्।
बमजनको आदेशमा वाइबालाई उनको सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रममा कु’ट्दा’कु’ट्दै मारिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। आलेमगरलाई र’क्ताम्मे अवस्थामा आश्रममा देखेको पनि प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ।
बमजनले आश्रममा बस्ने नाबालक आनी गंगामाया तामाङलाई ब’ला’त्कार गरेको आरोप छ। गंगामायाले डेढ वर्षअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूमाथि बमजनले ब’ला’त्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। अहिले गंगामाया काठमाडौंस्थित बालबालिकाको हितमा काम गर्ने एउटा संस्थाको संरक्षणमा छन्।
बमजनका विभिन्न आश्रमबाट बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका पाँचै जना आनी र अनुयायीका परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। केही महिनासम्म प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखे पनि पछि त्यो काम सुस्ताएको थियो।
अनुसन्धानले गति नलिएपछि दुई महिनाअघि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै मातहतमा विशेष टोली परिचालन गरेर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका थिए। सोही अनुसन्धानको निचोडका आधारमा प्रहरीले बमजनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट अनुमति मागेको हो। प’क्रा’उपछि प्रहरीले बमजनमाथि थप अनुसन्धान गर्नेछ। त्यसपछि मात्र कुन-कुन आरोपमा उनीविरू’द्ध अदालतमा मु’द्दा लैजाने भन्ने तय हुनेछ।